Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Khasaare Gaystay oo Kadhacay Magaalada Muqdisho.
Qarax Khasaare Gaystay oo Kadhacay Magaalada Muqdisho.
Posted by ONA Admin	/ June 23, 2017
Qarax culus oo loo malaynayo in uu yahay mid ismiidaamin ah ayaa ka dhacay Saldhiga Booliiska ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada amniga iyo kuwa gargaarka deg degga ah ayaa goobta qaraxu kadhacay gaadhay. Weerarkan ayaa u eg kii dhacay labo maalmood kahor ee lala beegsaday xarunta degmada Wadajir, waxaana la hadal hayaa in loo adeegsaday gaadhi bas ah ama gaadhiga loo yaqaan Noha oo ku qarxay albaabka hore ee saldhiga.
Weerarkan ayaa lagu soo beegay xili shacabka magaalada ay isu diyaarinayaan munaasabada ciida iyo maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakaysan ee Ramadan.
Weerarkan ugu dambeeyay ee kadhacay saldhiga dagmada Waabari waxaa kudhintay kudhawaad 10 qof oo uu kujiro wasiirkii dhalinyarada iyo isboortiga ee maamul goboleedka Jubbalan Sh Maxamad Yuusuf Ow Libaax, waxaana weerarkan ku dhaawacmay dad badan oo kale.
Kooxda Al-Shabaab ayaa bishan barakaysan weeraradii ugu waawaynaa oo ay ka gaysteen Muqdisho kudilay dad kudhaw 50 qof oo shacab ubadan.
Qaraxyadii iyo weerarkii Makhaayada Pizza House oo dhacay khamiistii hore ee 15kii bishan 6aad iyo kii dhacay Talaadadii lasoo dhaafay oo lala beegsaday xarunta degmada Wadajir, waxaana muuqata in weeraradan ay u dhaxeeyaan maalmo kooban, xili ay dowladu sheegtay in ay amniga magaalada gacan adag ku qabanayso.